Qaybaha unugga: sifooyinka iyo shaqooyinka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Waxaan ognahay in unugu yahay unugga shaqada aasaasiga ah ee dhammaan unugyada xayawaanka iyo dhirta. Xaaladdan oo kale, xayawaanka waxaa loo tixgeliyaa noolaha multicellular, sidaas darteed waxay leeyihiin wax ka badan hal unug. Nooca unugyada uu inta badan leeyahay waa unuga eukaryotic waxaana lagu gartaa inuu leeyahay xudunta dhabta ah iyo xubno gaar ah oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kala duwan qaybo ka mid ah unugga oo mid kasta oo iyaga ka mid ah uu leeyahay hawlo kala duwan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax walba oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qaybaha kala duwan ee unugga iyo waxa ugu weyn ee u dhexeeya unugga xayawaanka iyo unugga dhirta.
1 qaybaha unugga
1.2 xuubka plasma iyo cytoplasm
1.3 Endoplasmic reticulum iyo qalabka Golgi
1.4 Centrosome, cilia iyo flagella
1.5 mitochondria iyo cytoskeleton
2 Farqiga u dhexeeya unugyada xayawaanka iyo dhirta
Waa xubin ku takhasusay habaynta iyo maaraynta macluumaadka gacanta. Unugyada Eukaryotic waxay inta badan leeyihiin hal nukleus, laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban halkaas oo aan ka heli karno nuklei badan. Qaabka xubintani waa kala duwan tahay iyadoo ku xiran unugga uu ku jiro, laakiin badanaa waa wareegsan. Maaddada hidda-socodka waxaa lagu kaydiyaa qaabka DNA-da (deoxyribonucleic acid), kaas oo mas'uul ka ah isku-dubbaridka hawlaha unugga: laga bilaabo koritaanka ilaa taranka. Waxa kale oo jira qaab-dhismeed muuqda oo gudaha xudunta u ah oo loo yaqaanno nucleolus, kaas oo ay ku sameysmaan xoojinta chromatin iyo borotiinka. Unugyada naasleyda waxay leeyihiin 1 ilaa 5 nucleoli.
xuubka plasma iyo cytoplasm
Xuubka balasmaha waa qaab dhismeedka ku wareegsan unugga wuxuuna ku dhex jiraa dhammaan unugyada noolaha. Waxay u xilsaaran tahay ku-xiridda waxyaabahaas iyo ka ilaalinta deegaanka dibadda. tani macnaheedu maaha inay tahay xuub daboolaya maadaama ay leedahay daloolo iyo dhismayaal kale oo ay tahay in unugyo gaar ah ay maraan si ay u fuliyaan hababka gudaha ee unugga xayawaanka.
Saytobalaasamka unugyada xayawaanku waa meesha bannaan ee u dhaxaysa xuubka cytoplasmic iyo nukleus, kaas oo ku wareegsan dhammaan xubnaha. Waxay ka kooban tahay 70% biyo inta soo hartayna waa isku dhafka borotiinka, dufanka, karbohaydraytyada iyo cusbada macdanta. Dhexdhexaadkani waxa uu lama huraan u yahay horumarinta jiritaanka unugyada.
Endoplasmic reticulum iyo qalabka Golgi
Xuubka endoplasmic reticulum waa xubin ka mid ah kiishyo fidsan iyo tuubo is dulsaaran oo wadaaga isla meel gudaha ah. reticulum-ka waxa loo habeeyay dhawr gobol: xuubka endoplasmic-ka qallafsan, oo leh xuub fidsan iyo ribosomes la xidhiidha, iyo xuubka endoplasmic ee siman, muuqaal ahaan aan caadi ahayn oo aan lahayn ribosomes la xidhiidha.
Waa xuubka taangiga oo kale ah oo mas'uul ka ah qaybinta iyo bixinta alaabta kiimikada ee unugga, taas oo ah, waa xarunta dheecaanka gacanta. Waxa ay u qaabaysan tahay dhismaha Golgi ama qalabka unugga dhirta waxa uuna ka kooban yahay saddex qeybood oo kala ah: xuubka xuubka, tuubooyinka ay walaxda gudaha iyo dibadda uga soo guurto unugga, iyo ugu dambeyntii vacuole.
Centrosome, cilia iyo flagella
Centrosome-ku waa sifada unugyada xayawaanka waana qaab dhismeed cylindrical godan oo ka kooban laba sentile. si toos ah loo habeeyay midba midka kale. Halabuurka xubintan waxa uu ka kooban yahay tuubooyinka borotiinka, kuwaas oo hawl aad muhiim u ah ka haya qaybta unugyada tan iyo markii ay habeeyaan cytoskeleton oo ay abuuraan dunta birta xilliga mitosis. Waxa kale oo ay soo saari kartaa cilia ama flagella.
Cilia iyo calanka unugyada xayawaanka waa lifaaqyo ay sameeyeen microtubules kuwaas oo siiya dareeraha unugyada. Waxay ku jiraan noolaha unugyada unugyada waxayna mas'uul ka yihiin dhaqdhaqaaqooda, halka unugyada kale loo isticmaalo si loo baabi'iyo hawlaha deegaanka ama dareenka. Tiro ahaan, cilia ayaa aad uga badan calanka calanka.
mitochondria iyo cytoskeleton
Mitochondria waa organelles ku jira unugyada xayawaanka halkaas oo nafaqooyinku yimaadaan iyo Waxa loo beddelaa tamar habka loo yaqaan neefsiga. Waxay qaab ahaan u fidsan yihiin oo waxay leeyihiin laba xuub: xuub gudaha ah oo laalaaban si uu u sameeyo cristae iyo xuub bannaan oo siman. Tirada mitochondria ee unug kasta ku jirta waxay ku xidhan tahay dhaqdhaqaaqooda (tusaale ahaan, unugyada muruqa waxaa jiri doona tiro badan oo mitochondria ah).
Si loo dhamaystiro liiska qaybaha ugu muhiimsan ee unugyada xayawaanka, waxaanu tixraacaynaa cytoskeleton. Waxay ka kooban tahay fiilooyin ka jira cytoplasm, marka lagu daro shaqada qaabaynta unugyada, waxay sidoo kale leedahay shaqada taageeridda xubnaha.
Farqiga u dhexeeya unugyada xayawaanka iyo dhirta
Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya qaybaha xayawaanka iyo unugga dhirta labadaba. Aynu aragno waxa ay ku kala duwan yihiin:
Unugyada dhirta Waxay leedahay gidaar unug ah oo ka baxsan xuubka balaasmaha ee aanu xayawaanku lahayn. Waxay u egtahay inay tahay dahaarka labaad oo si fiican u daboolaya. Derbigani waxa uu siinaya adkeysi weyn iyo ilaalin weyn. Derbigani wuxuu ka kooban yahay cellulose, lignin iyo qaybo kale. Qaybaha gidaarka unugga qaarkood waxay leeyihiin codsiyo xagga goobaha ganacsiga iyo warshadaha.
Si ka duwan unugga xayawaanka, unuga geedka wuxuu ku leeyahay chloroplasts gudaha. Chloroplasts waa kuwa leh midabbo sida chlorophyll ama carotene oo ah waxa u oggolaanaya dhirta in ay ku sawirro.
Unugyada dhirta ayaa awood u leh inay soo saaraan cuntadooda taas oo ay ugu wacan tahay qaybo ka mid ah qaybaha aan organic ahayn. Waxay ku sameeyaan tan iyada oo loo marayo dhacdooyinka sawir-qaadista. Noocyada nafaqada waxaa loo yaqaan autotrophic.
Unugyada xayawaanku, dhanka kale, ma laha awood ay ku soo saaraan cunnadooda u gaarka ah qaybaha aan dabiici ahayn. Sidaa darteed, nafaqadeeda waa heterotrophic. Xayawaanku waa inay ku daraan cuntada dabiiciga ah sida xayawaanka kale ama dhirta laftooda.
Unugyada dhirtu waxay oggolaadaan inay beddelaan Tamar kiimikaad oo tamar gelisa tamarta qorraxda ama iftiinka iyada oo ay ugu wacan tahay habka sawir-qaadista.
Unugyada xayawaanka, tamarta waxaa bixiya mitochondria.
Caytobalaasamka unugyada dhirta waxaa ku jira faaruqyo waaweyn 90% meesha bannaan. Mararka qaarkood waxaa jira hal faaruq oo weyn. Vacuoles-yadu waxay u adeegaan si ay u kaydiyaan alaabooyin kala duwan oo asalkoodu yahay inta lagu jiro dheef-shiid kiimikaad. Intaa waxaa dheer, waxay meesha ka saartaa qashinka kala duwan ee ku dhaca falcelinta dheef-shiid kiimikaadka isku midka ah. Unugyada xayawaanku waxay leeyihiin faaruqyo laakiin aad bay u yar yihiin mana qaataan meel bannaan.
Unugyada xayawaanka waxaan ka heleynaa xubin ka mid ah xubnahaas waxaa loo yaqaan centrosome. Waa midda mas'uulka ka ah qaybinta koromosoomyada si ay u abuurto unugyada gabadha, halka unugyada dhirta aysan jirin xubin noocaas ah.
Unugyada dhirtu waxay leeyihiin qaab-dhismeed, halka unugyada xayawaanku leeyihiin qaabab kala duwan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto qaybaha unugga iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » qaybaha unugga